Hevitra MPANOHARIANA | Aprily 2013
Jereo ny anaranao ao amin'ny lisi-pifidianana
2013-04-26 @ 22:04 in Ankapobeny
Mety hifangaro ny resaka ataontsika nefa tsy maninona izany. Resaka fandraisana andraikitra maha-olompirenena aloha izy ity fa tsy voatery hoe resaka politika (fakana fahefana sy fitantanam-panjakana). Somary efa elaela aho ny niezaka ny hana-potoana handalovana ao amin'ny biraom-pokontany fa tamin'ity herinandro ity vao tontosa izany. Raha ny daty farany moa dia ny alahady 28 avrily no fara-fijerena izany. Ny biraom-pokontany moa ahitana soratra manao hoe tsy misokatra Asabotsy sy Alahady ny birao ka asa na mba hisokatra manokana izy ireo amin'ny andro roa farany na tsia.
Ny tsikaritra voalohany dia vitsy ireo efa nandalo nanamarina ny anarany sy ny mombamomba azy na dia efa herinandro farany fijerena azy aza ity herinandro efa nifarana ity. Tsy misy filaharana moa ny mijery azy fa olona iray izay ihany no teo alohako. Mazava loatra fa izay rehetra tao an-tranony no nojereny ny anarana sy mombamomba ireo ampy taona afaka nifidy. Toy ny kisendrasendra ihany angamba fa nahitana fahadisoana avokoa tao amin'ireo mombamomba ny olona nojerena tsirairay avy. Rehefa tonga ny anjara fanamarinana nataoko dia samy nahitana diso avokoa ihany koa ny anay mivady, tonga taona hifidy ato amin'ny tokantranonay. Lasa ho azy ny saina manao hoe fa mba ahoana koa ary izany izay hitako nojerena teto dia nahitana fahadisoana izany avokoa. Tsy fantatro loatra aloha ny an'ny sasany fa mba tsetsatsetsa tsy aritra iny. Ny vadiko anefa amin'io mihevitra ny tsy hiraharaha loatra na hifidy na tsy hifidy, izaho indray fantany tsara fa raha ny resaka tahaka izany, lazainy fa mora mirona loatra amin'ny politika aho. Nilazako ny zava-nisy hitako vao gaga izy...
Manaraka izany indray, tsy maharaka loatra ny fomba nizarany ny vaki-paritra aty amin'ny fokontany aho fa sanganehana ihany raha mahita fa vakim-paritra iray izao mety ho tsy iray lisi-pifidianana ao amin'ny fokontany iray (fantatsika fa maro mponina Antananarivo raha resaka isan'olona ao amin'ny fokontany iray ka voatery zarazaraina ho vakim-paritra vitsivitsy). Mety ho fahadisoana any amin'ny CENI-T ihany koa iny noho ny tsy fahalalany izay tena any am-potony fa manapatapaka fotsiny ny hoe hatreto ny lisitra iray dia miditra amin'ny lisitra manaraka indray ny hafa, saingy mbola tombatombana avy amintsika olo-tsotra hatrany izany. Na izany na tsy izany, miteraka ahiahy ny toe-javatra tahaka izany.
Ny fahatelo dia tsy mitovy amin'ny lisitra taloha nandraisana anjara tamin'ny fifidianana intsony ny nametrahana ny lisitra fa niova ho alfabetika. Tahaka ny ahoana moa izany? Teo aloha dia nifanaraka laharana ny iray trano, ary mifanakaiky ihany koa amin'ny mpiray vodirindrina ny lisitra misy ny an'ny tena. Afaka mifanara-maso tsara noho izany ny manodidina hoe ary ny anaran-dranona toa tsy hitako ao amin'ny lisitra nefa ao ambadika ny misy azy ary mifanaraka ihany koa ny laharan-trano. Ny amin'izao fotoana kosa, raha ny hitako tao amin'ny fokontaninay, raha vao tsy misy itovizana ny anaran'ny iray tokantrano dia pejy samihafa no misy azy. Ny anarako izao manomboka amin'ny AND... fa any amin'ny voalohandohan'ny lisitra, ny anaram-badiko indray manomboka amin'ny RA... fa saiky mamarana ny lisitra mihitsy. Vao mahita izany ianao dia fantatrao avy hatrany fa tsy misy fomba tsotsotra kokoa ahafahana manara-maso tsara io lisi-pifidianana io ary tsy maintsy mijery ny lisitra manontolo ianao hijerena hoe sao misy anaran'olona hafa nampidirina ho iray trano aminay ato. Miala tsiny aho fa ny tao an'eritreritra voalohany dia hoe "Efa mivonona ny hangala-bato ry zareo raha izao hitako izao no zohina" satria na izaho izao aza tsy maharaka hoe firy izany izahay iray trano no ato anatin'ity lisitra ity. Ny mahavariana anefa dia mbola misy olona tsy tafiditra ao anaty lisitra izao ary loham-pianakaviana izay nanao sonia ny taratasim-panisana aza saingy any amin'ny fokontany hafa indray moa iny. (Ny raiko no tratran'io tranga io).
Farany, toa inian'ny CENI-T mihitsy ny nanakorontana amin'ny fomba hafa ny lisi-pifidianana tsy ahafana manamora ny fanaraha-maso, noho ny lisitra tsy nampanarahana ny laharan'ny trano fa nampanarahana ny anarana. Azo atao tsara ny mampiditra anaran'olona hafa atao iray tokantrano amiko na dia tsy fantatro mihitsy aza io olona io, ary izany dia mety hiteraka ny hoe misy olona iray afa-misoratra im-betsaka amin'ny faritra na toerana maro amin'ny lisi-pifidianana nefa tsy hisy hahamarika loatra izany. Tamin'izahay nifidy taloha tsy nisy nanamarina mialoha ny idirako ny biraom-pifidianana ny tanako ijerena na misy ranomainty ve sa tsia. Izany fisalasalana izany moa miaraka amin'ny fahagagàna hoe hamaroan'ny mpifidy mety hahatratra hatramin'ny 12 tapitrisa nefa ny tamin'ny fitsapa-kevi-bahoaka 17 novambra 2010 dia nolazain'ny CENI tamin'izany fa 7 151 223 tamin'izany fotoana izany ary niakatra ho 8 562 483 tamin'ny 2011 izany hoe hitombo 3,5 tapitrisa izany ny isan'ny mpifidy hatramin'ny 2011 no mankaty amin'ny 2013. Efa nandeha ihany anefa ny resaka fa nisy anaran'olona niverimberina maro ihany tamin'ireny (30.000 ny nolazain'ny filohan'ny CENI-T raha 1.500.000 ny nolazain'ny hafa). Ao anatin'izany zavatra mifamahofaho izany isika no hanatontosa ity fifidianana ity ka asa ny fahazotoanareo fa dia atao ihany izy ity. Fanontaniana farany, fa maninona tokoa raha navoaka aterineto ny lisitra dia afa-nanamarina izay mpiray trano aminay izahay e? Hafatra: raha mbola azonareo atao ihany dia jereo sy hamarino ihany ny lisi-pifidianana tsy hahavery zo anao fa ny fanaraha-maso azy moa dia tena tolona hafa mihitsy.